Previous Article Ụgbọ Òlòkó Akwọrịkọọ Mmadụ Abụọ n'Abagana, Bibìé Ọtụtụ Ihe
Next Article Obianọ Akpọọ Òkù Ka A Kwàlite Ịdị n'Otu, Mmekọrịta Obodo Na Ibe Ya
Gọvanọ Willie Obianọ, bụ aka na-achị steeti ahụ mere ka a mara nke a oge ọ gara ịmara ka ọrụ si aga na ya bụ okporo ụzọ, bụ nke o sikwara na ya wee ga gbapee mmiri a gbapùrù site n'aka maazị Paschal Agbọdike, bụ onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Ihiala nke 2 n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ.
O kọwara ya bụ ụzọ dịka nke ga-eweta mmepe ma mekwa ka ihe dịrị ndị bi na mpaghara ahụ mfe ma ọ bụrụ na a rụchaa ya. Ọ kpọkùzịkwara ndị mpaghara ahụ ka ha gaa n'ihu ịkwàdò otu ndọrọ ndọrọ APGA, iji wee gaa n'ihu n'ọrụ ọma dị ihe iche na-ewere ọnọdụ ugbu a.
N'okwu nke ya, Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti ahụ, bụ maazị Marcel Ifejiọfọr kwuru na a na-etinye uchu nke ukwuu na ya bụ ọrụ na ọrụ ngo ndị ọzọ e ji n'aka ugbu a, ma kwuo na a ga arụchapụ ya bụ ọrụ n'oge a tụrụ anya ya.
Onye ji ya bụ ọrụ ngo, bụ maazị Philip Eyisi, n'okwu nke ya, mere ka a mara na ya bụ ọrụ ga-akụrụ ọnụ n'oge a tụrụ anya, ebe ọ bụ gọọmenti na-eweta ego.
Ya bụ okporo ụzọ bụ nke dị kilomita iri na otu na ụma iri asaa na ise, nwee ọwà mmiri dị kilomita iri na anọ n'akụkụ ya abụọ, ma bụrụkwa nke e bidoro n'ahọ 2017.
Gọvanọ Obianọ nyekwàzịrị maazị Ifejiọfọr ntụzi aka ka e tinyesie ọkụ okporo ụzọ na ya bụ ụzọ ngwa ngwa a rụchara ya.